General Mamiriro | Law & More B.V.
Nezvedu » General Conditions
1. Law & More B.V., yakagadzwa kuEindhoven, Netherlands (pano inonzi "Law & More”) Ikambani inezvikwereti zvishoma, yakagadzwa pasi pemutemo wechiDutch nechinangwa chekudzidzira basa repamutemo.
2. Aya mamiriro ezvinhu mazhinji anoshanda kune ese mabasa evatengi, kunze kwekunge zvabvumiranwa neimwe nzira mukunyora isati yapera basa. Iko kushanda kwemamiriro ekutenga ese kana zvimwewo zvinhu zvinoshandiswa nemutengi hazvibatanidzwe pachena.
3. Zvese mabasa zvevatengi zvichagamuchirwa chete uye kuitiswa Law & More. Iko kushanda kwechinyorwa 7: 407 ndima 2 Danish Civil Code inonyatso kubviswa.
4. Law & More inotakura migove zvinoenderana nemirairo yekuita kweDutch Bar Association uye, maererano nemirau iyi, inozvipira kusaburitsa chero ruzivo rwunopihwa nemutengi maererano nebasa racho.
5.Kana zviri maererano nebasa rakapihwa Law & More mapato matatu anofanira kubatanidzwa, Law & More anobvunza mutengi mberi. Law & More haina mhosva yekukanganisa kwe chero rudzi rwezvitatu izvi uye inofanirwa kugamuchira, isina kumbonyorwa kubvunzana uye m'malo yemutengi, kudzikisirwa kwezvikwereti kune wechitatu bato rinoitirwa. Law & More.
6. Chero chikwereti chinogumira pamari iyo ichabhadharwa kunze mune iyoyo chaiyo kesi pasi peiyo nyanzvi dhinishuwarenzi ye Law & More, yakawedzerwa neanoductible akawandisa pasi peinishuwarenzi iyi. Iko, nekuda kwechikonzero chero chipi, hapana kubhadhara kunoitwa pasi peiyo nyanzvi dhinishuwarenzi dhinari, chero chinzvimbo chinogumira kune huwandu hwe € 5,000.00. Pamunokumbira, Law & More inogona kupa ruzivo nezve (kufukidzwa pasi peiyo) nyanzvi dhinishuwarenzi sezvakatorwa kunze na Law & More. Vatengi vanogonesa Law & More uye inobata Law & More zvisina kukuvadzwa zvinopesana nezvikwata zvechitatu zvine chekuita nebasa.
7. Zvekuita kwebasa, mutengi ane chikwereti Law & More muripo (pamwe neVAT). Iyo muripo unoverengwa pahwaro hwehuwandu hwemaawa akashandirwa akawedzerwa neyakaenderana awa yeawa. Law & More anochengetera kodzero yekugadzirisa nguva nenguva maawa ake.
8. Zvinopesana nehuwandu hweiyo invoice inofanira kukurudzirwa mukunyora uye kuendeswa kune Law & More mukati memazuva makumi matatu mushure meinvoice zuva, kukundikana iyo invoice ichagamuchirwa chaizvo uye pasina kuratidzira.
9. Law & More iri pasi pemutemo weDutch Anti-Mari Kubvisa uye Anti-Gandanga Kupa Mari (Wwft). Kana basa rakawira mukati meyero yeWwft, Law & More ichaita mutengi nekushingairira. Kana chiitiko (chakarongwa) chisina kujairika kutenderera mukati meiyo Wwft chikaitika, ipapo Law & More anosungirwa kuzivisa izvi kuDutch Financial Intelligence Unit. Mishumo yakadaro haina kuziviswa kune mutengi.
10. Mutemo weDutch unoshanda kune hukama huri pakati Law & More uye mutengi.
11. Muchiitiko chekupokana, dare reDutch muOost-Brabant richava nesimba, pane nzwisiso yekuti Law & More anosara aine mvumo yekuendesa makakatanwa kudare anga ave nemasimba dai sarudzo yemaforamu iyi ingadai isina kuitwa.
12. Chero kodzero yemutengi kuita zvichipesana vachipokana Law & More, ichapererwa nechero chiitiko mukati megore rimwe mushure mezuva iro mutengi akaziva kana aigona kunge akaziva nekuvapo kwekodzero idzi.
13. Invoice ye Law & More inotumirwa kune mutengi neemail kana neyakajairwa mail uye kubhadhara kunofanirwa kuitika mukati memazuva gumi nemana mushure meinvoice zuva, kukundikana iyo mutengi zviri zvisiri pamutemo uye anosungirwa kubhadhara mubereko wakadzika we 14% pamwedzi, pasina chiziviso chiri pamutemo chiri kudikanwa . Zvebasa rakaitwa na Law & More, yekubhadhara kwemukati inogona kuve invoice chero nguva. Law & More ane kodzero yekukumbira kubhadhariswa kwekumberi. Kana mutengi akatadza kubhadhara iyo yakabhadharwa nenguva, Law & More ane kodzero yekumisa basa rake nekukasira, pasina kumanikidzwa kubhadhara chero kukuvara kunokonzerwa nako.